Maxaa ka jira warka sheegaya inuu is casilayo Shariif Xasan ?. ( Hadal heynta Baydhabo ) – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Maxaa ka jira warka sheegaya inuu is casilayo Shariif Xasan ?. ( Hadal heynta Baydhabo )
Arboco, November, 7, 2018(HNN) Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay, kaasoo ku saabsan hadal heyn iyo xan hoose oo sheegeysa inuu is casilayo Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo dhowrkii todobaad ee u dambeeyay uu saarnaa cadaadis siyaasadeed uga imaanayay dowladda Federaalka.
Wararka ka soo baxaya Baydhabo aad ayay u kala duwan yihiin, xaalada siyaasadeed weli waa mid aan sal laheyn, marka loo eego is bedelada saacadba saacada ka dambeysa dhacaya.
Ciisee Cabdi Ciise
Maxaa ka jira warka sheegaya inuu is casilayo Shariif Xasan ?. ( Hadal heynta Baydhabo ) added by Ciise Cabdi Ciise on 07/11/2018